Heshiiska Quwadaha Aduunka Iyo Iran Oo Cabsi Geliyay Wadamada Sucuudiga Iyo Israel - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Heshiiska Quwadaha Aduunka Iyo Iran Oo Cabsi Geliyay Wadamada Sucuudiga Iyo Israel
Vienna(ANN)Heshiis dhexmaray Lixda dal ee ugu awooda baddan dunida oo ay hormoodka u yihiin Britain, USA iyo Rashia, ayaa markii u horaysay laga gaadhay guul. Kaddib markii heshiiskaa oo ka kooban 100 bog lala saxeexday dawlada Iran.
Wadahadalo mudo sanado ah soo taxnaa oo u dhexeeyay Iran iyo Lixda dal ee ugu awooda baddan dunida, ayaa ugu danbayntii laga gaadhay heshiis taarikhi ah oo la xidhiidha barmaanijka Nukleerka Iran, kaas oo maanta lagu saxeexay Vienna.
Madaxa siyaasadda Midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa sheegtay in heshiiska loo arkay inuu yahay mid diblomaasiyadda wax ka qaban karta xiisado tobanaan sano taagnaa.]kadib markii kulankii ugu dambeeyay ee wasiirada arrimaha dibadda Iran iyo 6-da dal ee quwadaha adduunka ee Vienna, ku gaadheen heshiiskaa.
Dhinacyada Iran iyo dalalka heshiiska saxeexday, ayaa mid walba dhinaciisa u sheegtay inuu guul u yahay heshiisku, kuwaas oo dhamaantood u sacaba tumay qodobada heshiiska ay gaadheen, balse dalalka Sucuudiga iyo Isareal ayaa ka muujiyay heshiiskaa dareen siyaasadeed iyo cabsi dublamaasiyadeed, waxayna ku tilmaameen mid Iran u ah guul, isla markaana xaalada amaanka gobolka oo Iran ku ahayd khatar sii xoojinaya.
Iran ayaa u muuqata in ay ogolaatay in baadhayaasha Qaramada Midoobay ay xaqiijiyaan, meelmarinta hakinta howlaha Nukleerka ee dalkeeda, taas oo ay ku bedelatay in cunaqabataynta mudada dheer saarnayd laga qaado, isla markaana ay wax soo saarkeeda suuqyada caalanka u iib geyso.
Madaxweynaha Iran Hassan Rohani ayaa sheegay in guul weynuu yahay dalkiisa heshiiska, halka Madaxweynaha Ruushka Butin ku tilmaamay mid u fasaxaya Iran inay wax disho oo hadda loo saxeexay Liisanka wax dilista.
Heshiiska ay wada gaadheen Iran iyo Lixda dal ee quwadaha aduunku ayaa kusoo beegmay xili xaalada siyaasadeed iyo colaad xumi ka aloosantahay mandaqada, iyadoo quwadaha dunida iyo Iran ku kala aragti duwan yihiin arrimahaa.
Sidoo kale Sucuudiga iyo Israel ayaa ku kala aragti duwan arrimaha ka socda mandaqada, tusaale ahaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya waxay Iran iyo wadamada heshiiska saxeexay marka laga reebo Ruushka dagaal kula jiraan kooxda la baxday dawlada Islaamiga ee ISIS, balse dalalka Sucuudigu hormoodka u yahay ayaa kasoo horjeeda arrintaa, waxayna u arkaan in shiicada oo isku balaadhinay mandaqada taageero la siiyay si loo xasuuqo suniyiinta.
Sidoo kale Dagaalka Yemen oo Sucuudigu hormood u yahay duqaynta dhinaca cirka ee Shiicada Xuutiyiinta iyo Isbahaysiga Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdale Saalax oo lala xidhiidhinyo inay Iran gacan siinay, waxay arrinta heshiiskan u muujinay weji kale oo siyaasadeed, taas oo sababtay in heshiiska Iran iyo wadamada quwadaha aduunku noqdo mid Sucuudiga dareen cabsi ah geliya, kaas oo la filayo inuu wax ka bedelo xaalada siyaasadeed ee mandaqada iyo xiisada waqtigan dalka Yemen.